Health | Rochak Khabar
रोगी हुनु भन्दा पहिले नै प्राकृतिक उपचार र जीवनशैली परिवर्तनबाट निरोगी रहौं । खानामा रोटी, भातको मात्रा २० र ४०५ र हरियो सागसब्जींसुपको मात्रा ६०/८०५ हुनु जरुरी छ ।
25 Dec, 03:59 AM
अनुहारको दाग, खत र डण्डीफोर हटाउन गर्नुहोस यी उपाय अनुहार आकर्षक देखाउने रहर जोकोहिलाई पनि हुन्छ । आफ्नो मुहार सुकोमल पार्नका लागि विशेषगरि महिलाहरु अनेकौ प्रकारका कस्मेटिक उत्पादनको सहायता लिने गर्छन् । हुनत छाला सुकोमल तथा आकर्षशक बनाउने भन्दै अनेकौ प्रकारका उत्पादनहरु बजारमा उपलब्ध छ । तर यी उत्पानहरु...
19 Dec, 04:24 AM
पढ्नुहोस मनतातो पानीसँगै लसुन, अदुवा र कागती सेवनका फाइदा
योगले मात्रै शरीर र मन स्वस्थ हुने होइन । शारीरिक स्वास्थ्यका लागि खानपान र जीवनशैलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले उनी खानपानमा उत्तिकै सचेत छन् । हरेक दिन बिहान खाली पेटमै उनी लसुन, अदुवा र कागती सेवन गर्छन् मनतातो पानीसँग । यी चिज सेवन गर्नुका फाइ...
18 Dec, 03:39 AM
परिवार नियोजनको कुन साधन कस्तो ? जानी राखौ
परिवार नियोजनका साधन स्थायी र अस्थायी गरी २ किसिमका हुन्छन् । स्थायी महिला तथा पुरूष दुवैमा गर्न सकिन्छ जसलाई बन्ध्याकरण भनिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्दैन तर महिलामा भने ढाड दुख्ने हुन्छ भन्छन् तर यो शल्यक्रियाको कारणले ढाड दुखेको भने होइन । कुनै...
18 Dec, 03:36 AM
पढ्नुहोस यस्ता छन् युरिक एसिड नियन्त्रण गर्ने घरेलु उपायहरु जोर्नी सुन्निने, तातो हुने र बाहिरको छाला हलुका रातो हुने गर्छ। यस्तो प्रायः युरिक एसिड बढेर हुन्छ। बियर पिउनेहरू धेरैले युरिक एसिडको पीडा ३० वर्षपछि नै अनुभव गरिसकेका हुन्छन्। किनभने बियरले युरिक एसिड बढी उत्पादन गराउनुका साथै मृगौला भएर शरीरबाट निस्कने...
18 Dec, 03:34 AM
पढ्नुहोस यस्ता छन मानसिक तनाव घटाउने ७ तरिका
१) काम गर्ने राम्रो वातावरण राम्रो काम गर्नका लागि काम गर्ने वातावरण राम्रो हुनुपर्छ । राम्रो वातावरण छैन भने मनमा काम गरौं भन्ने उत्साह हुँदैन । काम गर्ने जोस जाँगर चल्दैन । त्यसकारण अफिसमा काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । टिमवर्क भएकाले सबै...
18 Dec, 03:26 AM
यी ७ उपाय अपनाएर जोगाउनुस आफ्ना आँखा
सामान्य र स्वस्थ आँखाले विना कुनै दुखाई टाढा एवम् नजिकको वस्तु स्पष्ट हेर्न वा देख्न सक्दछ । कुनै व्यक्ति जसको आँखा सामान्य छ्रैन उसले टाढाको बस्तु धमिलो देख्न सक्दछ । टाढाको बस्तु हेर्न आँखाका परेलाहरु च्यातेर हेर्नुहुन्न यदि यसो गरेमा आँखा दुख्छ । कुनै...
13 Dec, 06:24 AM
जानी राखौ ..! नखानुस् यी दुई खाना एकसाथ, ज्यानै जान सक्छ
स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौ । त्यसैले आजकाल हामी खाना प्रति निकै सचेत हुने गर्दछौ । हामीले खाने खानाका विषयमा सचेत हुनु जरूरी पनि छ । हामीले खाने कुनै-कुनै खाना साथमा खाँदा हामीलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुन्छ ।
11 Dec, 03:59 AM
थोरै सुत्ने व्यक्ति हरु मा यस्ता रोग लाग्न सक्छन्
रातमा आवश्यकताअनुसार ननिदाउने व्यक्तिलाई बिहान गुलिया र ‘जंक फुड’ खान मन लाग्छ । धेरै गुलिया परिकार खाँदा रगतमा सुगरको मात्रा बढेर मधुमेहको सम्भावना रहन्छ । शरीरभित्रबाट फोहोर तत्व बाहिर निस्किनु भनेको शरीर ‘रिपेयर’ 2
11 Dec, 03:50 AM
भुडी लाएर हैरान हुनुन्छ प्रयोग गर्नुहोस यी १० घरेलु उपाय
यदि तपार्इंलाई पेटको कुनै रोग छैन भने बिहान उठ्नेबित्तिकै मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर पिउँदा पेटको बोसो घट्छ । यसले मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ ।
10 Dec, 04:02 AM
सुत्दा ब्रा र पेन्टी नलगाई सुत्नुनुहोस ! एस्तो छ बैज्ञानिक कारण दिनमा ब्रा र पेन्टी अनिवार्य लगाउने र राति खोल्ने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । भित्री वस्त्र खोलेर सुत्नुका केही फाइदा छन्ः 0
10 Dec, 03:50 AM